Tilmaama Laawuroo kan taphoota Pirimeer Liigii Ingiliiz - BBC News Afaan Oromoo
Tilmaama Laawuroo kan taphoota Pirimeer Liigii Ingiliiz
Taphoota michummaa idiladdunyaan booda, si'aawinaan kan eegamu Pirimeer Liigiin Ingiliiz, Sambata Duraa fi Dilbata ni taphatama.
Taphni torbee 32ffaa liigichaa tapha Kiristaal Paalaasiifi Livarpuul taasisaniin eegalama.
Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Maark Laawuransan akka gadaanutti tilmaamee jira.
Kiristaal Palaas Liiverpuul Waliin
Taphoota michoomaa dura Kiristaal Paalaas Haadersfiildiin dirreesaarratti 2fi 0 kan ittiin mo'atan qabxii gaarii isaan bara kana galmeessan keessaa isa tokkodha jedha Laawuroon.
Ammas sadarkaa gad aanutti bu'uurraa ooluuf Paalaas qabxii argachuu qabu. Tapha Liiverpuul waliin qabaniin kana gochuu ni danda'u jedha Laawuroon.
Tilmaama Laawuroo: Kiristaal Paalaas 1 - 1 Liiverpuul
Biraayiteen fi Leester Siitii
Leester dorgommii waancaa FA keessaa ba'anis Piriimer Liigii keessatti sadarkaa toorbaffaan xumuruuf Barnileefi Everteen waliin dorgommii cimaa taasisaa jiru. Kun ammoo Saawuuzhampiteen waancaa FA kan hin mo'anne yoo ta'e Leester akka Yurooppaa Liigiitti hirmaatu taasisa.
Kanaaf Leester mo'achuudhaaf sababiiwwan hedduu qabu.
Biraayiteenis taanaan Maanchister Yunaayitidiin mo'amanii dorgommii waancaa FA keessaa ba'aniiru. Tapha Piriimer Liigii isa dura tureenis Everteniin mo'amaniiru. Taphini Biraayiteen Leester waliin taasisu dirreesaaniirratti waan ta'eef qaphxii gaarii galmeessiisu.
Tilmaama Laawuroo፡ Biraayiteen 1-1 Leester
Maan Yunaayitid- Siwaansii
Tapahattoonni Maan Yunaayitid taphoota michummaa irratti sochiin agarsiisan bareedaa ture. Romeeluu Lukaakuu fi Pool Poogbaan, Beljiyeemiifi Firaansiif galchii lakkoofsisuun isaanii kilabichaaf oduu gaariidha.
Siwaansiinis Kaarlos Kaarvaahaalin leenji'aa, tapha kudhan keessaa lama callaa mo'amuun isaanii rekoordii dansaadha. haa tahu malee Maan Yunaayitidiin dirree isaaniirratti waan morman natti hin fakkaatu.
Tilmaama Laawuroo: Maanchistar Yunaayitid 2 - 1 Siwaansii
Niiwukaasil fi Haadarsifiildi (sa'aatii 11:00 galgala)
Taphoota lama dhiheenyatti Niiwukaasiloonni Seent Jamsi Paarkitti taasisan injifachuu danda'aniiru. PL keessa turuuf tapha kana moo'uun isaaniif barbaachisaadha.
Deeggartoonni Niiwukaasil kilabni isaanii tapha kana injifachuun liigicha keessa akka turuuf deeggarsa ho'aa ni taasisu jedhamee eegama.
Haadarsifiildonni ji'a darbetti haala gaariin taphachaa turani. Kiriistaal Paalaasiin moo'amuun isaanii garuu miira isaanii gadi buuseera.
Tilmaammii Laawuroo: Niiwukaasil 2-0 Haadarsifiildi
Waatfoord Bornimaz waliin (11:00)
Gabatee Pirimeer Liigichaatiin kilaboonni lamaan kunniin qabxii walfakkaataa 36'n, galchiin walcaaluun Waatfoord 10ffaa Bornimaz ammoo 11ffaa irratti argamu. Kanaaf morkiin cimaan gidduu isaanii akka jiraatu eegama.
Waatfoord dirreesaanii irratti taphachuun isaanii mo'achuuf carraa olaanaa qabaataniis, gahumsisaanii yeroodhaa yerootti waan jijjiiramuuf xumura tapha kanaa tilmaamuun ni rakkisa.
Kana malees Waatfoord, Arsenaaliifi Livarpuuliin galchii hedduun mo'amaniiru. Kanaafis ni mo'amu jedheen amana.
Tilmaama Laawuroo: Waatfoord 1-2 Bornimaz
Weest Biroom fi Barnileey (11:00)
Leenjisaan Weest Biroom Alen Paardiiwu erga Boorn Maawuziin injifatamanii booda, pirimiyerliigii keessa turuuf carraa dhumaarra akka jiran dubbatanii turan.
Paardiiwu kana haa jedhan malee carraan pirimiyerliigii keessa turuuf qaban waan duguugame fakkaata.
Taphicha keessaa gadi bu'uurraa baraaramuuf yoo xiqqaate qabxiin 10 isaan barbaachisa. Taphni isaan hafe ammo tapha torba.
Gama kaaniin Barnileey sadarkaa torbaffaa qabachuuf falmataa jira. Hirmaannaa liigii Irooppaa argachuuf ta'uu mala.
Falmiin kilaboota lamaanii akkmiin akka goolabamu kan ilaallu ta'a.
Tilmaama Laawuroo: Weest Biroom 1-1 Barnileey
Weest Haam fi Saawuzaampitan
Tapha kanaan dura taphataniin Weest Haamonni dirree isaaniirratti Barnileeyin 3 -0 injifatamanii turan. Weest Haam ni fooyya'aa kan jedhu gaaffii guddaadha.
Taphni kun kilaboota lamaaniifuu akka malee murteessaadha.
Tilmaama Laawuroo: Weest Haam 2-1 Saawuzaampitan
Evartan fi Maanchistar Siitii
Warri Evartan taphoota lamaan darban mo'atanis, gahumsa Maanchistar Siitii ittiin injifatan wan qaban hin se'u.
Siitiin ammoo tapha kanaafi tapha Maan Yunaayitid waliin qaban ni mo'atu taanaan, chaampiyoonaa liigichaa tahuusaanii mirkaneessu.
Siitiin tapha kana mo'achuu danda'u. Haa tahu malee Morinoon mo'amanii Siitiin chaampiyoonaa akka tahan kan taasisan natti hin fakkaatu.
Tilmaama Laawuroo:Evartan 0-2 Maanchistar Siitii
Arsenaal Istook waliin (9:30)
Arsenaal dirreesaarrattis ta'u dirreesaatiin ala, kilaboota gurguddoo waliinis ta'u garee kam waliinuuyeroo taphatu tilmaamuun rakkisaadha. Haata'u malee tapha kana akka mo'atan mirkanaa'aadha. Isatook sadarkaa bu'uurraa ooluuf yaalii taasisuu ni malu. Haata'u malee Arsen Wiinger salphaatti mo'atu jedheen tilmaama.
Tilmaama Laawuroo: Arsenaal 3:0 Istook
Cheelsii fi Tootanihaam (12:00)
Cheelsiin garaagarummaa qabxii Totanhaam waliin qabu dhiphisuuf carraansaanii kana.
Tapha hawwataa akka arginus nan abdadha.
Tapha kana Cheelsiin akka mo'atu nan tilmaama.
Tilmaama Laawuroo: Cheelsii 2-0 Tootanihaam